Tallaalka COVID-19 hadda waa khasab dhammaan shaqaalaha Air Canada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Tallaalka COVID-19 hadda waa khasab dhammaan shaqaalaha Air Canada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Ku guuldareysiga in si buuxda loo tallaalo Oktoobar 30, 2021 waxay yeelan doontaa cawaaqib illaa iyo ay ku jirto fasax ama joojin aan la bixin, marka laga reebo kuwa u qalma hoy.
Air Canada waxay soo bandhigaysaa siyaasad cusub oo caafimaad iyo badbaado.
Dhammaan shaqaalaha Air Canada iyo kireystayaasha waa in laga tallaalaa coronavirus.
Xeerka tallaalka ee khasabka ah, baaritaanka looma bixin doono beddel ahaan.
Air Canada ayaa maanta sheegtay inay soo saartay siyaasad cusub oo caafimaad iyo badbaado si loo sii ilaaliyo shaqaalaha iyo macaamiisha taas oo qasab ka dhigaysa dhammaan shaqaalaha shirkadda inay si buuxda uga tallaalaan COVID-19 iyo inay soo sheegaan xaaladdooda tallaalka illaa Oktoobar 30, 2021. Intaa waxaa dheer, in shirkaddu ay tallaal buuxa ka dhigayso shuruud shaqo oo shaqsi kasta oo ay shirkaddu shaqaalaysiisay.
Tan iyo bilowgii masiibada Air Canada wuxuu hormuud u ahaa qaadashada tallaabooyinka sayniska ku saleysan ee looga jawaabayo COVID-19. Tani waxay ku dartay diyaaradda inay ka mid noqoto kuwa ugu horreeya ee u baahan baaritaanka heerkulka ka horeeya ee macaamiisha, siyaasadaha xirashada maaskaro dusha saaran iyo adeegsiga tijaabada. Go'aanka lagu doonayo in dhammaan shaqaalaha khadka tooska ah ee Air Canada, Air Canada Rouge iyo Fasaxyada Air Canada si buuxda loo tallaalo oo looga warbixiyo heerka tallaalkooda waa qorshe kale oo lagu xaqiijinayo badbaadada iyo fayoobaanta dhammaan shaqaalaha iyo macaamiisha.
Under ah siyaasadda tallaalka ee khasabka ah, imtixaanka laguma bixin doono beddel ahaan. In kasta oo Air Canada ay gudan doonto waajibaadkeeda si ay u qaabisho shaqaalaha sababaha saxda ah, sida xaaladaha caafimaad, aan la tallaali karin, ku guuldaraysiga in si buuxda loo tallaalo Oktoobar 30, 2021 waxay yeelan doontaa cawaaqib ilaa iyo ay ku jirto fasax ama joojin aan la bixin, marka laga reebo kuwa u qalmo hoy. Siyaasadda Air Canada waxay sidoo kale waafaqsan tahay dhawaaqii ay dhowaan soo saartay Dowladda Kanada ee ku aaddanaa in shaqaalaha waaxda gaadiidka hawada, tareenka, iyo badda ee dowladda dhexe nidaamiso la tallaalo dhammaadka Oktoobar 2021.
Air Canada waxay weli ka go'an tahay inay sii waddo horumarinta iyo adeegsiga tallaabooyinka amniga cusub iyo hababka markay noqdaan kuwo la heli karo oo waxtar u leh macaamiisha. Tallaabooyinka noocan oo kale ah ayaa muhiim u ah dib -u -bilaabidda nabdoon ee warshadaha gaadiidka hawada oo, marka laga reebo awood u siinta dadka Kanada inay si xor ah u safraan, sidoo kale waa darawal muhiim u ah dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha Kanada.